shaqada ee caadiga ah waqtiga madal si ay u doortaan waa qowladda pachinko a
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ shaqada ee caadiga ah waqtiga madal si ay u doortaan waa qowladda pachinko a
Raadi si loo hubiyo in ka tago madal waa sheekada aan macquul aheyn, laakiin, si looga hortago maalgelin ku xadgudba, xogta iyo ciddiyaha waa meesha aad rabto inaad aragto. In, in miiska si ay u doortaan waqtiga shaqada ee caadiga ah, waxaan eegi doonaa siday u wanaagsan tahay waxaan doortaan in ay qayb ka mid ah dareenka madal. First of dhan, waxaan eegi doonaa xogta.
Tani waa, Iyada oo ku xidhan wakhtiga si ay u booqdaan, marka si aad u aragto macluumaadka, waxaad u baahan tahay in la tixgeliyo oo la tixgelinayo xaqiiqda ah in ay tahay maalintii shaqada ee caadiga ah. In maalinta caadiga ah ee ganacsiga, maxaa yeelay, ma jiraan wax u socdaan in ay dibadda u saaray kooxda martida pachinko ah, oo kaliya sababtoo ah waxay ahayd maalin ka hor, waxaa fiican in la joojiyo ka si degdeg ah u fadhiisteen.
in miiska in ay yihiin maalintii hore, haddii aad tahay tirada jeer iyo nooca hit dhinac ee Atari iyo tirada kacaanka maanta waa muhiim. Oo waxay soo baxday maalin ka hor, sidoo kale dhowr ah oo wanaagsan oo Kacdoonkii taagan maalintii, waxaa suuro gal ah in maalin ka hor oo dhidibkii uusan waxba iska badalin. Intaa waxaa dheer, xataa haddii lahayn adkeeyay Inochikugi, ciddiyaha marayay kubad ilaa bilowga musmaarrada induction, waxaad laga yaabaa in la adkeeyay.
hadda laambad xogta, waxaa sidoo kale waa nooc ka mid ah xawaaraha wareeg ilaa dhuftay waxaa lagu soo bandhigay. Ilaa mid ka mid ah hit weyn, ugu hayso ayaa sidoo kale la hubiyo in ilaa xadka ay wareeg. A dhowr maalmood ah, tirada xoog hufan ee meerto ah maalinta, iyo haddii hit of socodka la joojiyo oo laga yaabo inaadan magacaabo, waa in ay jiraan waa wax qiimo weyn ku dhacay waqtiga shaqada ee caadiga ah. Haddii
Horukon raaci mashiinka CR loogu talagalay qaatay lahaa dukaanka, akhriska sida caado, sida la ruxruxo ee qaabeynta kooxda iyo ROM ee Horukon, dooran tahay galaan nolosha xoog hadda taagan. Haddii
dadka doonaya in ay si joogta ah ku guuleysan in Hanemono
, maxaa yeelay, sixitaanka dhidibkii u qaybsan yahay natiijada, waxaa la arki doonaa in xarunta of dhidibkii.
Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii xogta inay si adag, haddii lagu helo in uu noqdo ama aan la adkeeyo dhidibkii, iyo adkayn ciddiyaha induction ah laguma talinayo in maal aad u badan. taagan noocan oo kale ah, tan iyo markii ay heshay hoos xataa dhaqso, iyo marka ay ku dhufan doonto, waxaa lagu talinayaa in lagu badalo fiican oo wax of cut ah.
Intaa waxaa dheer, xataa haddii ay jiraan waa hit a xataa maalintii, iyo sidoo kale wax badan xawaaraha wareeg ah Ama haddii aan, in ay dhacdo xawaaraha wareeg ah waxaa laga yaabaa in dareen hoos u yahay, waxaan qabaa waxa fiican in aad isla markiiba u guuri dhiman. Intaa waxaa dheer, sixitaanka ciddiyaha waqtiga shaqada ee caadiga ah waxa uu noqday qori dhidib ah caadiga ah ee uu dukaanka. Haddii
gobolka dhidibkii, maxaa yeelay, ciddiyaha ee gobolka waqtiga la sii daayo ama marka kabashada noqdo aqrin, hay eegno wanaagsan. Ciddiyaha caadiga ah waa, laakiin waa milimitir dhowr by ratio qaab beddelidda, soo baxa kala duwan yihiin. Si aad u aragto dhidibkii aad u fududahay in la kala saaro madal ee ugu ujeedadoodu indhaha, laakiin qof kasta oo doonayo in si fudud oo aan la kala saaro, waxa aanu sharixi doona xawaare wareeg doonaa. Haddii la eego tirada
ee Kacdoonkii, in qowladda pachinko of exchange 3.5 yen ah, oo ku saabsan 13 jeer kun oo yen ah, oo ku saabsan 15 jeer beddelkeeda 3 yen, oo ku saabsan 17 jeer at sarrifka 2.5 yen, oo ku saabsan 20 jeer beddelkeeda 2.3 yen waxa ay haatan u leeyahay. Qaar ka mid ah kala duwanaansho ee model ah oo laga yaabaa, dabcan, laakiin tani tirada meerto halkii celcelis kun oo yen waa Haddii aad qabto saxayo ciddiyaha caadiga ah. Sidaas badan ama uusan soo jeedin, aad u malaynayso, laakiin tani waa xaqiiqada dhabta ah.
ganacsiga caadiga ah, xaqiiqada ah in furitaanka dhidibkii, maxaa yeelay, ku dhowaad jirin, isku day in aad doorato madal u jeesta u dhigma ugu yaraan heerka lacagta tirada Kacdoonkii. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna yen dhuftay kun. Tan iyo markii aad noqon doonaa si aan loo sineyn ee socodka kubada, by galinta ugu yaraan dhowr kun oo yen, waxaan dhihi karaa iyada oo macquul ah si loo ogaado by xisaabinta tirada isku celceliska ah ee Kacdoonkii. 3 yen sarrifka waxa uu noqday 20 jeer. Qaar ka mid ah kala duwanaansho ee model ah oo laga yaabaa, dabcan, laakiin tani tirada meerto halkii celcelis kun oo yen waa Haddii aad qabto saxayo ciddiyaha caadiga ah. Sidaas badan ama uusan soo jeedin, aad u malaynayso, laakiin tani waa xaqiiqada dhabta ah.
ganacsiga caadiga ah, xaqiiqada ah in furitaanka dhidibkii, maxaa yeelay, ku dhowaad jirin, isku day in aad doorato madal u jeesta u dhigma ugu yaraan heerka lacagta tirada Kacdoonkii. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna yen dhuftay kun. Tan iyo markii aad noqon doonaa si aan loo sineyn ee socodka kubada, by galinta ugu yaraan dhowr kun oo yen, waxaan dhihi karaa iyada oo macquul ah si loo ogaado by xisaabinta tirada isku celceliska ah ee Kacdoonkii.